Home News Sharif Xassan oo ku guulaystay in uu abaalmariyo Xuseen Badni iyo Farmaajo...
Sharif Xassan oo ku guulaystay in uu abaalmariyo Xuseen Badni iyo Farmaajo oo ku hungoobay qorshahiisa
Sharif Xassan ayaa ku guulaystay in uu abaalmariyo Xuseen Shiikh oo ka mid ahaa kooxdii uu u istcimaalay in ay la dagalaan Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Xussien Bandi oo loo magaacabay Wasiir ayaa ka mida kooxaha sida joogtada idaacadaha uga cayn jiray Gudoomiye Jawaari isaga oo ku shaqeeynayo amarka RW Kheyre iyo kan Sharif Xassan.
RW Kheyre iyo MW Sharif Xassan oo ay ka dhaxeysaa xiriir hoose iyo mid ehelnimo madaama sharaiif Xassan xaaskiisa ay eedo u tahay RW Kheyre. Labada nin ayaa waxaa ka dhaxeeyo qorshaha la doonayo in lagu go’doomiye MW Farmaajo iyo koxaha ku dhaw-dhaw. MW Farmaajo ayaa jagada wasiirnimada u balan qaaday Safiirka Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub Cali Faqi oo ay saaxiibo dhaw yihiin laakiin waxaa qorshahaan is hor istaagay RW Kheyre oo aan rabin in qof ku dhaw Farmaajo lagu soo daro Golaha Wasiiradda madaama uu isku diyaarinayo dagaal ka dhan ah Madaxweyne Farmaajo.
MW Farmaajo ayaa ku soo ururay min go’doon ku jiro oo aan saaxiibadiis jago u magacaabi karin ama kuwa isaga ka soo horjeeda aan shaqo fariisin ku samayn karin.
Previous articleFaah faahin:Ciidamada Dowlada Oo Dhalinyaro ku rasaaseeyay gudaha Magaalada Muqdisho
Next articleDEG DEG:Rasaas laga Maqlayo Xaafado Ka Tirsan Jigjiga&laamaha Ammanka Oo kulan deg deg ah la isku ku yeeray
Kheeyre oo rabo in uu il-duufo Rabitaanka Beelaha iyo farmaajo oo...
Kenya to close borders with Tanzania, Somalia